PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ပြည်သူတွေဆီက ဓားပြပြန်တိုက်တဲ့ ဆိုက်ပရပ်စ်ဘဏ်
မြန်မာပြည်ပြန်ကာနီးကျမှ ဘဏ်မှာစုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေထဲက အဖြတ်ခံရတယ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံရဲ့ ငွေအကြပ်အတည်းကြောင့် ဆိုက်ပရပ်စ် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ဘဏ်တွေမှာ ငွေထည့်ထားတဲ့/ ငွေ အပ်နှံထားကြတဲ့ သူတွေဆီက 100,000 EU အထက် အပ်နှံထားတဲ့သူဆီက 9.9% နှုန်းဖြတ်မယ်။100,000 EU အောက် အပ်နှံထားတဲ့ သူတွေဆီက 6.7% ဖြတ်မယ်တဲ့။ ကျမအပ်ထားတဲ့ ငွေတွေထဲက 6.7% အဖြတ်ခံရတယ်၊
အများနဲ့ဖြစ်တာ ဆိုပေမယ့် ချွေးနဲ့ရင်းပြီး ရှာထားတဲ့ သမာအာဇီဝ ပိုက်ဆံလေးတွေမို့ အရမ်းကို
EU100 ကို 6.7EU ဖြတ်မယ် ဆိုတော့..
EU10000 ဆိုရင်... 670EU
အခုထိလည်း ပိုက်ဆံကို ထုတ်လို့ မရသေးဘူး။ ကြာသပတေးနေ့အထိ ပိတ်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် စိတ်ဆင်းရဲ နေရတယ်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်က မထွက်ခင် အထွက်ခတ် ခတ် နေတယ်ထင်ပါရဲ့..း(
(Reuters) - Cyprus was working onalast-minute proposal to soften the impact on smaller savers ofabank deposit levy afteraparliamentary vote on the measure central toabailout was postponed until Monday,agovernment source said.Inaradical departure from previous aid packages, euro zone finance ministers want Cyprus savers to forfeitaportion of their deposits in return fora10 billion euro ($13 billion) bailout for the island, which has been financially crippled by its exposure to neighboring Greece.
Many Cypriots, having contributed to bailouts for Ireland, Portugal and Greece- Greece's second bailout contributed toadebt restructuring that blew the 4.5 billion euro hole in Cyprus's banking sector - are aghast at their treatment by Europe.
Copy from - seaandangel.blog